Zvizvarwa zveZimbabwe Zvokurudzirwa Kutanga Mabhizinesi Kumusha
Kubvumbi 22, 2013
WASHINGTON — Sachigaro vesangano idzva re Zimbabwe Diaspora Network - North America, Va Norbert Mugwagwa, vanoti vari kufara zvikuru nekutambirwa kuri kuitwa zvirongwa zvavo nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica.
Sangano iri riri kubatanidza zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica mukutsvaga nzira dzavangabatsire nadzo nyika kuti ibudirire munyaya dzezveupfumi.
Sangano iri rakaparurwa zviri pamutemo mukupera kweSvondo pamusangano wakaitirwa muVirginia State. VaMugwagwa vanoti zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica zvinodarika zana nemakumi mashanu zvakakwanisa kunge zviri pamhemberero iyi.
Gurukota rezvemari, VaTendai Biti, pamwe nemumiriri weZimbabwe muAmerica, Va Machivenyika Mapuranga, ndivo vaive vamwe vevanyarikani vakange vari pagungano iri.
VaBiti vakaudza gungano iri kuti Zimbabwe pari zvino iri kutarisana nedambudziko rekurasikirwa nezvizvarwa zvenyika zvakawanda zvine hunyanzvi zvichienda kune nyika dzekunze. Vakatiwo vanhu vanokwanisa vanofanirwa kushandisa nguva ino kuti vatsvage mabhizinisi avangashande navo kana avangaite sezvo kune mukana mukuru wekuita izvi munyika pari zvino.
VaBiti vakaenderera mberi vachiti vamwe vanosiyiwa nenguva sezvo vachimirira kuti vatange vawana mari ine chitsama kuti vatange mabhizimisi. Vakati chinhu chikuru kutsvaga ruzivo rwemabhizinesi aunenge uchida kuita, munhu wozotsvaga vanokutsigira.
VaBiti vakatiwo vagari vari kunze kwenyika vanofanirwa kufara sezvo gwaro rebumbiro idzva remitemo yenyika riine mitemo yakanaka inobata vana vezvizvarwa zveZimbabwe vakaberekerwa kunze kwenyika.
Vakatiwo kana bumbiro idzva rikatambirwa muparamende zvichave nyore kuti vana ava vanzi zvizvarwa zveZimbabwe kunyange hazvo vakazvarwa kunze kwenyika.